PDF सर्जक – doPDF द्धारा PDF फाइल बनाउनुहोस।
निशुल्क PDF परिबर्तक
20,000,000 डाउनलोड गर्नुहोस
चल्चित्र रेकर्ड र प्रसारणसम्बन्धी
Portable Document Format को संक्षित रुप नै PDF हो र यसलाई अडोबी ले सजिलोसंग कागजातहरु आदान प्रदान गर्न हेतु बनाएको हो। doPDF यसको नामले सुझाय जस्तै, पिडिएफ फाइल बनाउने निशुल्क रुपमा उपलब्ध सफ्टवेयर हो। doPDF भर्चुअल पिडिएफ प्रिन्टरको रुपमा स्वत स्थापित हुन्छ अत सफल स्थापन पछि Printers and Faxesको लिस्टमा तथा All Programs। doPDF प्रयोग गरेर तपाईं दुई किसिमबाट पिडिएफ फाइल सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ:
पिडिएफ छाप्नुहोस भर्चुवल प्रिन्टर ड्राइभर doPDF
द्धारा। तपाईं अघिपछि प्रिन्ट गरे झैँ नै प्रिन्ट कमाण्ड दिन सक्नुहुन्छ तर परिणाम भने पिडिएफ आउँछ, न कि छापिएको कागजको टुक्रा। Read more
Open परिबर्तन गर्न चाहनु भएको कागजात (वर्ड, एक्सेल, पावरपोइन्ट, वर्डप्याड, नोटप्याड वा कुनै पनि छपाई योग्य कागजातह) प्रिन्टरहरुको लिस्टबाट, choose Print अनि select doPDF त्यसपछी तपाईंलाई पिडिएफ फाइल कहाँ सुरक्षित गर्ने भनेर सोधिने छ अनि फाइल बन्ने बित्तिकै तपाईंको डीफल्ट पिडिएफ फाइल पाठकसंग स्वत खुल्नेछ। कति सजिलो छ भनेर त स्क्रिनशटले पनि देखाउँछ पिडिएफ फाइल बनाउनुहोस माइक्रोसफ्ट वर्डबाट (वर्डबाट पिडिएफ):
doPDF स्टार्ट अप विन्डो प्रयोग गरेर।
doPDF संग एउटा कार्यान्वयन योग्य फाइल हुन्छ जसलाई हामी स्टार्टअप प्रोग्रामबाट पनि प्रयोग गर्न सक्छौं र यसलाई परिबर्तक-विजार्डको सट्टामा प्रयोग गर्न सकिन्छ। Read more
जानुहोस Start->Programs->doPDF अनि परिबर्तन गर्ने विजार्ड चालु गर्न doPDF मा क्लिक गर्नुहोस। आफुले चाहेको फाइल पिडिएफमा लैजान ब्राउजरको प्रयोग गरे फाइल छान्नुहोस। त्यसपछी पिडिएफ फाइलमा रुपान्तरण गर्नCreateमा क्लिक गर्नुहोस। स्क्रिनशटले देखाउँछ कि यसको प्रयोग कति सजिलो छ भनेर (वर्डबाट पिडिएफमा):
doPDF प्रयोग गर्नु पर्ने ९ कारणहरु
यो सरल र छरितो छ
तपाईं कुन फाइल र कहाँ भन्ने कुरा मात्र रोज्नुहोस अनि doPDF ले तुरुन्तै – तपाईंले यो त गजबको रै’छ भन्नु भन्दा पहिले नै, पिडिएफ फाइल तयार गरिसक्छ।
तपाईंको पैसा बचत गर्छ
doPDF व्यक्तिगत एबम ब्यापारिक दुवै प्रयोजनको लागि निशुल्क पिडिएफ फाइल परिबर्तक हो। पिडिएफ फाइल निर्माण गर्न यसको प्रयोग बापत तपाईंलाई एक सुको पनि लाग्दैन (तर हामी तपाईंले स्तरोन्नति गरेको मन पराउछौं) novaPDF)।
३२ र ६४ बिट सपोर्ट
३२ र ६४ बिटका विन्डोज संचालन प्रणालीहरुमा उही सेटअपले काम गर्छ।
DOC, XLS, PPT, PUB, DOCX, XLSX, PPTX, PUBX, HTML, TXT, जस्ता कुनै पनि छाप्न योग्य कागजातहरुलाई तपाईं निमेष भरमै पिडिएफ फाइलमा परिबर्तन गर्न सक्नुहुन्छ।
कुनै घोस्टस्क्रिप्ट नचाहिने
यसबाट पिडिएफ बनाउँदा कुनै तेस्रो पक्ष्य GhostScript वा Adobe Acrobat जस्ता प्रोग्रामको आबश्यकता पर्दैन जसको कारणले अरु पिडिएफ निर्माण गर्ने प्रोग्रामको तुलनामा यसको सेटअप फाइल अविश्वसनीय रुपले हल्का हुन्छ।
निर्मित फाइल भित्रका सामाग्रीहरु पनि खोजी योग्य हुन्छन जसको कारण सर्च इन्जिनहरुले पिडिएफ फाइलका टेक्स्टलाई पनि इंकित गर्दछन।
doPDF मात्र त्यस्तो निशुल्क पिडिएफ निर्माण कर्ता हो जसको इन्टरफेस हाल सम्म ३३ भन्दा बढी भाषामा उपलब्ध छ अनि ३० भन्दा बढी भाषाहरुमा हाम्रो वेबसाइट उपलब्ध छ। (धन्यबाद अनुवादकहरुलाई).
कम्प्युटरमा कुनै भार नपर्ने
अरु पिडिएफ निर्माण गर्ने सफ्टवेयरको तुलानामा, doPDF ले तपाईंको कम्प्युटरको नाम मात्रको ठाउँ ओगट्छ।
यो ग्रह बचाउने भूमिका निर्वाह
कागजातहरु कागजमा प्रिन्ट गर्नुको सट्टा पिडिएफमा लगेर किन यो धर्तीको केहि रुखहरु न बचाउने?
doPDF को मुख्य बिशेषताहरु
पूर्बनिश्चित पृष्ठ आकार
तपाइँ पहिले नै निश्चित गरिएका पृष्ठकारहरुबाट आफुलाई सुहाउँदो छनोट गरि पिडिएफ फाइल बनाउन सक्नुहुन्छ।पहिले नाइँ निश्चित गरिएका पृष्ठ आकारहरु: ए४, ए५, ए६, चिठ्ठी,कानुनी,एक्जेक्युटिभ, खाम, डिएल/सी५/बि५/मोनार्क /#१०
घटबड गर्न मिल्ने पृष्ठ आकार
यदि पूर्व निर्धारित पृष्ठ आकारहरु तपाईंलाई सुहाउँदो छैन भने, तपाईं स्वयम नै १० x १० एमएम देखि ३२७६ x ३२७६ एमएम सम्मका कुनैपनि आकारमा पिडिएफ फाइल बनाउन सक्नुहुन्छ।
यसमा बहुमापक सूचांकहरु समाबेश गरिएकाले तपाईं मिलिमिटर, इन्च, वा बिन्दु जुनसुकैमा कुनै पनि बेला परिबर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं आफैले गरिरहनु पर्दैन।
तपाईं आफ्ना तस्बिरलाई ७२ देखि २४०० डीपीआइ सम्मको रेज्युलुसनको फाइलमा संरक्षित गर्न सक्नुहुन्छ। यसको डिफल्ट मापन ३०० डीपीआइ रहेको छ। थोरै रेज्युलुसनको मतलब सानो तस्बिर या निम्न र बडी रेज्युलुसनको मतलब उच्च गुणस्तरको तस्बिर भन्ने बुझिन्छ। बडी रेज्युलुसनको तस्बिरको आकार ठूलो हुन्छ, सानोको कम।
पिडिएफ फाइलको सामग्रीहरुलाई तपाईं, १ देखि ४००% सम्म घटबढ गरि, हेर्न सक्नुहुन्छ।
पृष्ठ के तिर उन्मुख गराउने भनेर दिक्क मानु पर्दैन। तपाईं सजिलै ल्याण्डस्केप वा पोट्रेटमा, प्रिभ्यू क्षेत्रमा देखिने गरि, संरक्षित गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईं जहाँबाट जुन फाइल खोले पनि उही स्थान वा फोल्डरमा बारम्बार सुरक्षित गर्न सक्नुहुन्छ।
संगसंगै आउने फन्टहरुका सबसेटहरु
मूल फाइलमा झैँ फन्टहरु दुरुस्त देखिने निश्चित गर्न डु-पिडिएफले मूल कागजातमा प्रयोग भएका फन्टहरुलाई पिडिएफ फाइलमा नै समेट्छ।
पिडीएफ रिडरसंग खोल्नुहोस।
एक चोटी पिडिएफमा परिबर्तन गरिसकेपछि डिफल्ट पिडिएफ रिडरसंग तपाई यसलाई खोल्न सक्नुहुन्छ।
Mirrors | लग परिबर्तन गर्नुहोस।